Fahadisoana amin'ny marketing ara-tsosialy tokony hialanao | Martech Zone
Fahadisoana amin'ny marketing ara-tsosialy tokony hohalavirinao
Alahady, Jolay 5, 2015 Alahady, Jolay 5, 2015 Douglas Karr
Matetika aho no maheno orinasa maro miresaka momba ny media sosialy toy ny hoe haino aman-jery hafa. Mihoatra lavitra noho izany ny media sosialy. Ny media sosialy dia azo dinihina amin'ny faharanitan-tsaina, arahi-maso ny valiny sy ny fahafaha-manao, ampiasaina hifandraisana amin'ireo prospect sy mpanjifa, ampiasaina hitodihana sy hampiroborobo ny marikao amin'ireo mpihaino mifandraika amin'izany, ary ampiakarina hampitomboana ny fahefan'ny mpiasa sy ny marika sy ny lazan'izy ireo.
Izay paikady marketing dizitaly mahomby rehetra dia misy singa tsy mitombina ao amin'ny media sosialy. Fanombohana na tsia, izy io dia iray amin'ireo sehatra nomerika tsara indrindra handrosoana haingana ny orinasa, raha toa ka vita tsara ny varotra media sosialy. Ho an'ireo vaovao amin'ny indostrian'ny varotra niomerika, ny fanaovana fahatsapana voalohany tsara amin'ny media sosialy dia manakiana be satria iray ihany ny fotoana azon'izy ireo manamboatra azy io. Ny fahaverezana an'io vintana io dia midika hoe mihemotra ao ambadiky ny mpifaninana ary manamboatra laza izay tsy raharaha mora loatra. Jomer Gregorio, Digital Marketing Philippines
Ireto misy lesoka 8 momba ny varotra haino aman-jery sosialy tokony hialana
Tsy manana Tetikasan'ny media sosialy na inona na inona.
Mamorona kaonty amin'ny sehatra be loatra tsy ho ela.
Mandoa vola mpanaraka sandoka.
Miresaka be loatra momba ny marika sy ny marika fotsiny.
Mampiasa tsy misy ifandraisany sy tenifototra tafahoatra.
Mizara be loatra fanavaozana ao anatin'ny fotoana fohy. (Nefa mety tsy ho izany ianao mizara matetika araka izay azonao atao)
Manadino ny nahitsin'i.
Tsy firaharahiana ny ara-tsosialy lafiny amin'ny media sosialy.
Ny ankamaroan'ireo lesoka ireo dia iraisan'ny infographic taloha nozarainay lesoka amin'ny haino aman-jery sosialy. Singa iray lehibe anampiako an'io dia ny tokony hiezahanao hanorina lanja hatrany ary koa hitarika ny mpanaraka anao amin'ny antso ho amin'ny hetsika. Tsy midika hoe miakatra isaky ny fanavaozana aho, fa ao an-tsainao fotsiny fa ny paikadinao dia tokony hampiditra mpikambana vaovao hitarika hiverina amin'ny marikao hanaraka, mpankafy, fampisehoana, misintona, misoratra anarana na manova.
Tags: philippines marketing dizitalysary amin'ny haino aman-jery sosialySocial Media Marketinghadisoana amin'ny haino aman-jery sosialylesoka amin'ny media sosialy
Mar 12, 2016 amin'ny 11: 11 AM
Ekeo tanteraka ireo lesoka voalazanao etsy ambony.
Ireo no fahadisoana mahazatra indrindra ataon'ny olona amin'ny media sosialy. Ny haino aman-jery sosialy no toerana faha-2 tsara indrindra amin'ny fiara mety ho mpanjifa sy mpamaky aorian'ny milina fikarohana.
Miaraka amin'ireo lesoka ireo, ny tsy fanomezana fanavaozana tsy tapaka dia fahadisoana mahazatra ihany koa araka ny eritreritro. Nahita marika be dia be aho tao amin'ny Facebook izay tsy miraharaha ny mpihaino azy na oviana na oviana ary izany no mahatonga azy ireo tsy hanao firaisana.
Maniry fialamboly foana ny olona na zavatra mety hahatonga ny tenany ho sahirana ary Raha misy marika tsy manome karazana atiny toy izany dia mety hisy ny vintana ambony kokoa hanadinoan'ny mpihaino ny anaran'ny marika.
Noho izany mba hitazonana ny anarany ao an-tsain'ny mpihaino azy, dia tsy maintsy manome votoaty toy izany izy ireo izay afaka manampy, mampiala voly ary mitazona ny mpihaino azy ho sahirana.
Faly aho fa nanonona ireo fahadisoana lehibe amin'ny media sosialy ireo ianao. Koa Misaotra nizara izany taminay. 😀
Mar 13, 2016 ao amin'ny 3: PM PM
Misaotra tamin'ny fanampianao - manaiky tanteraka an'i David!
Jolay 11, 2016 amin'ny 11:22 PM
Misaotra anao amin'ny fampahatsiahivana sy fampahatsiahivana lehibe! Marina daholo ireo. manaiky tanteraka aho! Ny fandefasana lahatsoratra be loatra ao anatin'ny fotoana fohy dia tena fahadisoana ary matetika aho no miatrika ity olana ity. Mbola tsaroako fony aho mbola vao voalohany, namoaka votoaty intelo isan'andro aho ary tsy noraharahain'ny olona izany indrindra rehefa tsy mahaliana ny lohahevitra ary tsy azon'ny mpamaky ifandraisana. Zava-dehibe ihany koa ny famakian-teny mba hanorina fahatokisana sy fahatokisana ny marikao, ny tsipelina. tokony hojerena foana. Lahatsoratra mahafinaritra!